नगरवासीको अनुभूति दिलाउन उम्मेदवारी « eDeshantar News
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार / Sat May 28, 2022
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
नगरवासीको अनुभूति दिलाउन उम्मेदवारी
तपाईं चुनावी मैदानमा उत्रिनुको मुख्य कारण के हो ?
बनेपा नगरपालिकालाई सफा सुग्घर बनाएर सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना नै हो । साथै यहाँ ग्रामीण भेग पनि छ । त्यहाँका जनताहरूलाई हामी पनि नगरका बासिन्दा हौं भन्ने अनुभूति दिलाउनका लागि नै म चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु ।
सामाजिक क्षेत्रमा रहेको मान्छे राजनीतिमा आउन कति सजिलो रहेछ ?
राजनीतिक र सामाजिक दुवैतिर मैले काम त गरिरहेकै छु । म राजनीतिमा लागेको पनि तीन दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । सामाजिक काम पनि योसँगै सम्बन्धित भएकाले सधैं गरिन्छ नै । गाह्रो त मैले मानेको छैन । तर चुनावमा जनताको मत जित्ने कुरा गाह्रो नै हुन्छ । विगतमा हामीले गरेका कामहरूलाई जनताले पनि देखेका छन् । त्यसै कारणले जनताको माया पाउँछु भन्ने विश्वास मलाई छ ।
मतदाताले तपाईंसँग गरेको अपेक्षा के हो ?
विगतका काम र दिनलाई जनताले सम्झिएका पनि छन् । काम गर्दा नेतृत्वमा पुगेका पार्टीका नेताहरूले सही काम नगरेको र गरेको भए पनि पक्षपात पूर्ण तरिकाले गरेकाले पनि जनताले त्यो कुराहरू लिएर बसेका छन् । मेरा विषयमा कुरा गर्दा जनताले यदि शान्तिलाई जिताइयो भने यसले पक्षपात गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त भएर बसेका छन् ।
बनेपाको समस्या भनेको डुवान र फोहोरमैला हो, यसका लागि तपाईंका योजना के हुन् ?
डुवान हाम्रो मौसमी कुराहरू भयो । धेरै पानी पर्दा बनेपाको केही ठाउँमा पानी जम्ने गर्छ । यसका लागि सुधारका योजनाहरू हामीले बनाएका छौं । आगामी दिनमा अब डुवानको समस्या बनेपाबासीले भोग्नु पर्दैन । फोहोरमैला व्यवस्थापन यो सबै ठाउँको समस्या हो । हामीकहाँ पनि यो समस्या छ । तर, हामीले यसलाई अलिकति पनि व्यवस्थापन गर्ने हो भने यो ठूलो समस्या पनि होइन । यहाँ ७० हजारको जनसंख्या छ । तर बसोबास गर्ने १ लाख ४० हजार जति होलान् । यहाँ उत्पादन गरेका फोहोरलाई माइक्रो लेभलमा व्यवस्थापन गरियो भने खासै ठूलो समस्या होइन । त्यसका लागि काम गरी पनि रहेका छौं ।
बनेपा कृषि र पर्यटनसँग पनि जोडिएको ठाउँ हो यसका लागि तपाईंको योजना ?
बनेपाको ग्रामीण क्षेत्र कृषिसँग जोडिएको छ । कृषियोग्य जमिनहरू पनि प्रशस्त छन् । काभ्रे जिल्ला तरकारीको पकेट क्षेत्र पनि हो । यसैगरी दुग्धजन्य र पोल्ट्रीको उत्पादन पनि धेरै राम्रो छ । त्यसैले यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाहरू लिएर जान्छौं । ठाउँठाउँमा कृषि उपज बिक्री केन्द्र र ग्रामीण क्षेत्रमा कोल्ड स्टोरेज खोल्ने योजना पनि छ । कृषकको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि विभिन्न कामहरू पनि गर्नु छ । बनेपालाई पर्यटकीय रूपमा अघि बढाउन प्रशस्त ठाउँहरू छन् । त्यसका लागि पूर्वाधारहरू मात्रै बनाउन बाँकी छ त्यसका लागि हामी तयार छौं ।
चुनाव जित्नलाई मात्रै गठबन्धन कि अरू केही उद्देश्य छ ?
यो केन्द्रबाट भएको निर्देशनअनुसार यहाँ गठबन्धन निर्माण भएको हो । बनेपामा मेयरमा नेपाली कांग्रेसबाट र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार छन् । यसैगरी वडामा वडाको आवश्यकताका आधारमा तालमेल भएको छ । सिंगलभन्दा गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा जित्न पक्कै पनि सजिलो हुन्छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सफल, खुम्चियो एमाले
बजेटको आकार बढ्न सक्छ
संसद् बैठक ११ बजे बस्दै
स्थानिय तह निर्वाचन सकिए लगत्तै धमाधम प्रदेश सभा बैठक
काठमाण्डौ महानगरमा बालेन अघि, सृजना र केशव पछिपछि
सिर्जना सिंहको वडामा पनि दोब्बर मतले बालेनको लिड, कटाए ५५ हजार भोट
जिपी कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाको सक्रियतामा खाद्य महोत्सब
भरतपुरमा रेनु दाहाल निर्वाचित
काठमाडौंको मेयर बने बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल
जनताले हराएपछि ओलीको बर्बराहट
आवेग र कुण्ठामा सहानुभूति मात्रै दिन सकिन्छ : सांसद थापा
ग्रावेटि टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रधान–सम्पादक
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : . १४७१/०७६–७७
९८५११४७८५६ / ९८०११५७८५६
©2022 eDeshantar News All rights reserved. | Designed & Developed by : Appharu.com